Mashandisiro aungaita yako iPhone seRemote Control | IPhone nhau
Mashandisiro aungaita yako iPhone seRemote Control
Zvakaoma kuziva yega yega yega mikana yekuti yedu iPhone inotipa pasina kudiwa kwechetatu-bato kunyorera. Mazhinji emabasa iwayo anoshandiswa achienderera asi kune mamwe akawanda asina kunyanyo kufarirwaIzvo hazvioneke mukuongorora kana muzvinyorwa zvakanyanyoshanyirwa uye zvakadaro zvinoshanda uye zvakapusa.
Pane yedu iPhone tinokwanisa chete kutamba zvemukati, asi zvakadaro tinogona chengetedza vatambi vakati wandei vari pane mamwe majaira. Uye izvi zvese pasina chikonzero chekuvhura chishandiso, kana kuwanikwa kubva kune chero application nekuratidzira nzvimbo yekudzora. Iwe unoda kuziva here kuti ungadzora sei podcast iwe yaunoteerera pane iyo iPhone, iyo bhaisikopo pane iyo Apple TV uye mumhanzi pane iyo HomePod kubva kune yako iPhone? Pano tinotsanangurira zvese kwauri.
Zvirokwazvo vazhinji venyu munoziva iyo AirPlay mashandiro uye maitiro ekutumira zvemukati kune akasiyana anoenderana maspika Huye, chikamu chimwe chete ichocho icho chisingazivikanwe nevakawanda chinogona kushandiswa kudzora kutamba kwemamwe madivayiri anoenderana. Kunyanya, ndezve kubereka kweApple TV uye iyo HomePod, zvishandiso zvinogona kunge zvichitamba zvakasiyana zvemukati pane iyo iPhone uye zvaunogona kudzora kubva pazviri. Kuti uite izvi, hongu, zvakafanira kuti vave pane imwechete network yeWiFi.
Maitiro ekudzora chero mutauri neAirPlay 2 uchishandisa Siri
Chishandiso chimwe nechimwe chichaonekwa nezita raunenge waripa. Muchiitiko chePambaPod, iyo widget yekudzora ingango fanika neiyo yeiyo iPhone, ine masimba ekufambisira mberi, kudzoreredza, kutanga kana kumbomira kutamba, uye mukana wekusarudza odhiyo kuburitsa kune mamwe ma speaker anowirirana. Kana tikatarisa paApple TV madhiraivhu acho akatosiyana, kugona kudzora vhoriyamu uchishandisa mabhatani maviri pachinzvimbo chebhawa, uye nekuwana kwakananga kune iyo iPhone Remote app kune mamwe epamberi ekudzora.
Zvinosuruvarisa kuti hazvibvumidze kutonga kwevamwe michina seMac, nekuti zvingave zvinobatsira kwazvo kudzora kutamba kwemimhanzi yekomputa yedu kubva kwedu iPhone. Zvichida rinotevera reMusic application iro runyerekupe runogona kusvika rakazvimirira kune macOS 10.15 rinotipa izvo mukana. Kunyangwe izvi, iri rinobatsira uye rinowanikwa mashandiro ayo anonyatsoita kuti zvinhu zvive nyore kana ukajaira kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Mashandisiro aungaita yako iPhone seRemote Control
Apple inogadzira sisitimu yekuvhara michina inosiya chitoro isina kutenga
Apple kudzikisa kugadzirwa kwevekare maPhones